East Africa States Adopt Dunhu COVID-19 Yekushanya Kudzoreredza Chirongwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhau » East Africa States Adopt Dunhu COVID-19 Yekushanya Kudzoreredza Chirongwa
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vakuru vematunhu eEast Africa vakasangana vangangoita sachigaro weKenya Gurukota rezveKushanya neHindu, Najib Balala uye vese vakabvuma kutora matanho ekudzoreredza.
Makurukota akabvumirana kutora nzira dzakabatana uye dzakarongeka dzakanangana nekudzosa kwekushanya
Ronga inodaidzira kugadzirwa kwemapakeji ekukurudzira anovavarira kupisazve chikamu.
Urongwa hunoda kutsigira kudyara kwekushanya mudunhu kusanganisira madiki uye madiki mabhizinesi.
Kugadzirisa kupora kubva ku COVID-19 denda remhedzisiro pane kushanya uye kuchengetedza mhuka dzesango, iyo East Africa matunhu enyika vakagadzira uye vakagashira Regional COVID-19 Tourism Kudzorera Chirongwa iyo inoda kumutsidzira yekufambisa neyekushanya chikamu chakakanganiswa zvakanyanya nedenda repasi rose.
Pakati pezviyero zvakadaro kugadzirwa kwemapakeji ekusimudzira anoitirwa kudzimisa chikamu chekufamba uye chekushanya uye kutsigira mari dzekushanya mudunhu, kusanganisira mabhizinesi madiki uye madiki.
Makurukota akabvumiranawo kutora nzira dzakabatana uye dzakanangana dzakanangana nekudzosa kwekushanya uko kunosanganisira kupindira kwakanangana nekusimbisa matanho ari kuvandudzwa nekuitwa pamatanho emunyika.
Vakaenderera mberi nekufunga nekutambira gwaro redzidziso rematangiro ekumutsiridza mabasa munzvimbo dzekushanya uye nzvimbo dzekugamuchira vaenzi.
Nepo vachibvumidza nhungamiro, makurukota akabvumirana kuti pakanga pachidiwa EAC inowirirana nhungamiro yekumutsiridzwa kwenzvimbo dzekushanya uye dzekugamuchira vaeni munzvimbo iyi.
Iwo makurukota akaona kuti nhungamiro dzedunhu dzinobatsira mukuona kubatana mukumisazve mabasa ezvekushanya uye kubatsira kuvaka patsva kuvimba uye chivimbo nevashanyi vekunze vanoshanyira dunhu.
Pakati pemaitiro ehunyanzvi uye zviito zvinoenderana nezano muEast Africa Nharaunda yekushambadzira nzira ndeyekusimudzirwa kwenzvimbo uye epasi rose zvinokwikwidza zvigadzirwa zvekushanya zvakawanda.
Dzimwe nzira ndedzekushambadzira kweEast Africa senzvimbo inotungamira yekushanya muAfrica, ichipa chiratidzo kuEast Africa senzvimbo inotungamira yekushanya, nekusimbisa mutemo wezvekushambadzira pamwe nehurongwa hwemasangano nekusimudzira kushambadzira kwekushanyirwa kwenharaunda yeEast Africa nekusimudzira mari.